Chris Lattner, onye okike asụsụ Swift, nọrọ naanị ọnwa isii na Tesla | Esi m mac
Chris Lattner, onye okike asụsụ Swift, nọrọ naanị ọnwa isii na Tesla
Ọnwa ole na ole gara aga, akụkọ gbasara Chris Lattner si Apple apụ. Lattner bụ onye guzobere asụsụ mmemme Apple Swift, asụsụ nke na-eme ka ihe dịrị ndị mmepe mfe na obere nke nta abụrụla ngwa ọrụ ndị obodo a kacha eji eme ihe, obodo nke gbasaawanye ojiji nke asụsụ a. Lattner mesiri ya obi ike na usoro okirikiri ya agafeela Apple ma na ọ na-achọ ọrụ ọhụụ na nke ọhụụ. Akwụkwọ edemede bụ akara aka ya. Na Tesla ọ ga-elekọta Onye isi oche nke Autonomous na Autopilot Development na Tesla.
Mana ụbọchị ole na ole gara aga, anyị tetere na akụkọ ahụ na Lattner na Tesla nwere nkwekọrịta ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị ka ihe niile e sere nke ọma mana eziokwu bụ ọzọ. Dabere na The Wall Street Journal, isi ihe kpatara ọpụpụ ya bụ Elon Musk, onye isi oche nke Tesla, ka ọ bụrụ usoro kwụ ọtọ kwurula dị njikere tupu njedebe nke afọ a, ihe na-agaghị ekwe omume dịka Lattner kwadoro.
Buru n'uche na ọtụtụ koodu nke na-ekwu banyere ịkwọ ụgbọ ala nke ụgbọ ala Tesla emebeghị Lattner n'ihi ya enwere họọrọ ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ tupu ịbanye na oge ịkwụsị oge agaghị ekwe omume izute na-enweghị akụkụ nke ọrụ na ihe niile emere na afọ ndị a. Na akaụntụ Twitter ya, Lattner na-emesi obi ike na ya ghere oghe maka ọrụ ọhụụ yana na ya ga-anụ onyinye sitere n'aka injinia nwere ahụmahụ. Anyị ga-agbaso njem nke agwa a dị mkpa na akụkọ ihe mere eme kachasị ọhụrụ nke Apple, n'agbanyeghị ịhapụ ụlọ ọrụ Cupertino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Chris Lattner, onye okike asụsụ Swift, nọrọ naanị ọnwa isii na Tesla
Ignacio, ezighi ezi ...
Aha: "Chris Lattner, onye okike nke asụsụ Swift, ha na-adịgide naanị ya." ha na-anogide ka o na-ano?
Ọgwụgwụ nke paragraf mbụ: "Akwụkwọ edemede bụ akara aka ya." Tesis ka ọ bụ Tesla?
Akụkụ nke ihe si na Apple's Pride Edition straps ga-aga na mkpakọrịta LGBT
Jiri oge eriri ndị a mara mma merie oge okpomọkụ gị Apple Watch